Uncategorized – Pahilo Page
काठमाडौं । देशका केही नदीमा आज पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान छ । दूधकोसी, तामाकोसी र सुनकोसी नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, भेरी, महाकाली, वाग्मती पधेरादोभान र पश्चिम राप्तीमा बहाव उल्लेख्य बढ्नेछ । अरू केही नदीमा बहाव सामान...
काठमाडौं । वीरगञ्ज भंसार कार्यालय आफैँ तस्करीमा लिप्त भएको पाइएको छ । नाकाबाट हुने आयातको भंसार जाँच पास गर्ने कार्यालय नै तस्करीमा संलग्न हुनु राज्य निरीह भएको प्रमाण पनि हो । आयातित सामानको सही तरिकाले भंसार जाँच गरेर सो बराबरको कर संकलन गरी राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भन्सार कार्यालयका अधिकृतहरु तथा कर्मचा...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्री जस्तो व्यक्तिले पदीय मर्यादा विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गएर आवेगमा आइ कमजोरी गरेको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।...
प्रधानसेनापति सहितका उच्च सैनिक अधिकृत यतिबेला अमेरिकामा मात्रै छैनन्, दुई कुरामा उनीहरुको व्यापक चासो छ । एक– एसपिपी विवादमा दिनुपर्ने चित्तबुझ्दो जवाफ । अर्को– हतियारको भुक्तानी । जतिबेला तत्कालिन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी हुनेबारे अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार...
एजेन्सी । आफ्नो मनपर्ने कलाकारको जीवनका बारेमा जान्न जोकोही फ्यान उत्सुक हुन्छन् । फ्यानहरुलाई कलाकारहरूले कुन खानेकुराको सौखिन छन् भन्ने कुरामा झन चासो राख्छन् । यहाँ बलिउडका लोकप्रिय कलाकारको मनपर्ने खानेकुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन उमेरले ७९ वर्ष पुगिसके, तर उनी फिल्ममा निरन्तर स...
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीले रेड्मी नोट ११ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आकर्षक क्यामेरा र छिटो चार्ज हुने ब्याट्री रहेको यो फोन नेपालमा ल्याएको हो । स्मार्टफोनको बजारमा हुने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो दरमा उत्कृष्ट उत्पादनको रुपमा रेड्मी नोट ११ प्रो भित्र्याइएको कम्पनील...
सामाजिक सञ्जालहरु मध्ये युवा पुस्तामाझ चर्चित एक एप हो, स्न्यापच्याट । हरेक क्षणको अपडेट दिन मिल्ने, भिडियो, फोटो तथा च्याटका मार्फत कुराकानी गर्न मिल्ने हुँदा यो एप निकै चर्चित छ । टिकटक जस्तै फिचर रहेकाले पनि यो एपलाई धेरैले मन पराउने गरेका छन् । के तपाईलाई थाहा छ ? स्न्यापच्याटमा गेम पनि खेल्न सकिन्छ । यस कारण प...
जीवनशैली परिवर्तनसँगै हिजोआज स–साना बालबालिकामा मोटोपन तथा नबढ्ने समस्या पनि बढ्न थालेको छ। कुनै बच्चा चहिने जति बढ्न सक्दैन भने कुनै बालबालिका चाहिने या बढ्नु पर्ने भन्दा धेरै बढेका हुन्छन्। कुपोषण भएका बालबालिकाको अपेक्षित रूपमा शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास हुन सक्दैन। यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रभावकार...
तीन वर्ष अघि प्रशारण आएको नेपाली चलचित्र ‘प्रसाद’ को सिक्वेल ‘प्रसाद २’ बन्ने भएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी गराइएको हो । सामाजिक, पारिवारिक र प्रेमकथामा आधारित रहेको यो चलचित्रलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्देशन गर्दैछन् । उनले यो चलचित्र यसअघि प्रसारण भएको प्रसादको विशुद...
बैशाखमा देशभर कति मत बिग्रिए ?
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर १३.२४ प्रतिशत मत बदर भएको छ । तथ्यांकअनुसार चुनाव हुन बाँकी बाजुराको बूढीगंगा गाउँपालिका र निर्विरोध भएका चार चारपालिका बाहेक ७४८ स्थानीय तहको मतदानमा त्यति मत बदर भएको हो । त्यतिबेला स्थानीय तहका कूल ३३ हजार ७१५ जना जनप्रतिनिधिमध्ये निर्विरोधबाहेक ३३ हजार १५८ जना न...